काठमाडौं, १२ कात्तिक । कात्तिक ५ गते विशेष चार्टर विमानबाट ‘रअ’ प्रमुख सामन्त कुमार गोयल काठमाण्डौं आए । करिब १६ घण्टा नेपालमा रहेका गोयलले त्यही रात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग २ घण्टा गोप्य छलफल गरेको समाचार बाहिरियो ।
गोयलको भ्रमणलाई सरकारले गोप्य राख्न खोजेको थियो । तर, सम्भव भएन । उनकै पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीमबहादुर रावललगायतले त्यसको चर्को विरोध गरे । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ‘ओली-गोयल गोप्य भेट’को पुष्टि मात्र गरेनन्, गोयल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतको रुपमा नेपाल आएको’ दावी समेत गरे ।
‘ओली-गोयल गोप्य भेट’ को सत्तारुढ पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिर चर्को आलोचना भयो । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेललगायत ओली पक्षधर नेताहरुले यसको बचाउ गरिरहे ।
केही पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग पनि गोयलले भेटेको हुन सक्ने आशंका समाचार माध्यममा थियो । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले त्यसको खण्डन गरे । कांग्रेस सभापति, विपक्षी दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
घटना सेलाउँदै गएपछि फेरि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई समेत गोयलले भेटेको हल्ला उड्यो । ओली सरकारको विशेषः दुतको रुपमा नेपाल आएका सामन्तले ओली सरकारका कटु आलोचक पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग भेट्ने कुरा आफैंमा प्रासंगिक थिएन ।
डा. भट्टराईसंग सामन्तले भेटेको हल्ला नेपालका हैन, भारतीय सञ्चार माध्यमबाट चलेको थियो । भारतीय अनलाइन ‘द प्रिन्ट’ को अक्टोबर २७ को संस्करणमा ज्योति मलहोत्राले एउटा खबर लेखेकी छन् । त्यसमा भट्टराई-सामन्त भेटको दाबी गरिएको छैन । आंशका मात्र गरिएको छ ।
ज्योति मलहोत्राको रिपोर्टमा ‘रअ’ प्रमुख सामन्त कुमार गोयल ‘आइसोलेशन’ मा छन् भनिएको छैन, ‘सम्भवत आइसोलेशनमा हुन सक्दछन्’ भनिएको छ ।
ज्योति मलहोत्राको रिपोर्टलाई कान्तिपुरका सम्पादक सुधीर शर्माले ट्वीट गर्दिएपछि त्यो रिपोर्ट नेपाली सञ्चार माध्यमको ‘नोटिस’ मा आयो । शर्माले मलहोत्राको रिपोर्ट ट्वीट गर्दा आफ्नो तर्फबाट कुनै ‘कोट’ गरेका छैनन् ।
तर पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका प्रेस सल्लाहकार विश्वदीप पाण्डेले त्यसको खण्डन गरिसकेका छन् । भट्टराई दम्पत्ति कोरोना संक्रमणको कारण करिब दुई हप्तालदेखि होम आइसोलेशनमा छन् ।
पाण्डेले भनेका छन्, ‘डा. बाबुराम भट्टराईको प्रेस सल्लाहकारका रुपमा द प्रिन्टको ज्योति मलहोत्राको रिपोर्टको निन्दा गर्न चाहन्छु । भर्खरैको गोयलको नेपाल भ्रमणको क्रममा उनको डा. भट्टराईसँग भेट भएकै छैन । यस्ता कुरा सम्बन्धित रिपोर्टर र न्यूज एजेन्सीले रुजु गरेर मात्र प्रकाशित गर्दा राम्रो हुन्थ्यो होला ।’
पाण्डेले कान्तिपुर सम्पादक सुधिर शर्माको द प्रिन्टको ट्वीटलाई रिट्वीट गर्दै आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसमा भनिएको छ, ‘रअ प्रमुख नेपाल किन बोलाइए र के भयो भन्ने भेट्नेलाई थाहा होला, तर कोभिड-१९ संक्रमणपछि आइसोलेशनमा बस्नु भएका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भेट्नु भएको भन्ने सर्वथा झुठो हो ।’
पाण्डेले कान्तिपुर सम्पादक सुधीर शर्माप्रति रोष व्यक्त गर्दै अगाडि लेखेका छन्, ‘शेयर गर्नुअघि राष्ट्रिय पत्रिकाका सम्पादकले भेरिफाई नगर्नु, गर्न अवश्यक नठान्नु, सारै दुःखद, लज्जास्पद ।’
ज्योति मलहोत्राको रिपोर्ट र सुधीर शर्माको ट्वीटलाई आधार बनाएर सरकार समर्थकहरुले भट्टराई-सामन्त भेटको समाचार फैलाउने प्रयत्न गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीप्रति लक्षित विरोध र आलोचनाबाट मानिसको ध्यान अन्यत्र मोड्न यस्तो हल्ला उडाउन खोजिएको डा. भट्टराई निकटस्थहरुको बुझाई छ ।
वरिष्ठ साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौला पनि यो हल्लाबाट प्रभावित भएका छन् । संग्रौलाले आफ्नो ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘डा. भट्टराई रअ प्रमुख सामन्त गोयललाई सुटुक्क भेट्ने, सामन्त गोयल डा. बाबुराम भट्टराईको देहमा सुटुक्क कोरोना भाइरस सल्काउने, अनि यता बाबुराम आइसोलेशनमा, उता सामन्त गोयल आइशोलेशनमा, देहमा भाइरस सल्काउनु सामान्य कुरा हो, दिमागमा भाइरस सल्काए कि भन्ने आशंकाले पो सतायो ।’
यद्यपि, संग्रौला स्वयम्ले आफ्नो सामाजिक सञ्जालहरु आफ्ना नजिकका प्रसंशकहरुले चलाउने बताउँदै आएका छन् । उता, डा. भट्टराईका प्रेस सल्लाहकार विश्वदीप पाण्डले संग्रौलाको यो ट्वीटको समेत प्रतिउत्तर गरेका छन् । पाण्डले भनेका छन्, ‘प्रिय खगेन दाजु, सामन्त गोयलले डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेटेका छैनन्, कृपया सच्याउन अनुरोध छ ।’
भट्टराई दम्पत्ति भने आइसोलेशनमा छन् । डा. भट्टराईलाई ७ गतेपछि ३ दिनसम्म ज्वरो आए पनि स्वास्थ्य स्थिति सुधार हुँदै गएको छ । भट्टराई पत्नी तथा जनता समाजवादीकी नेतृ हिसिला यमीलाई भने कोरोना पोजिटिभ देखिए पनि लक्षणहरु देखिएका छैनन् ।
सामाजिक सञ्जालमा बारम्बार देखिइरहने भट्टराई आइसोलेशन अवधिमा मौन बसेका छन् । उनले पाण्डेका ट्वीटहरु रिट्वीट मात्र गरेको देखिन्छ । पछिल्लो पटक उनले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले पठाएको स्वास्थ्यलाभ सम्बन्धी समाचार ट्वीट गरेका छन् ।